Mon, Jan 17, 2022 | 21:30:55 NST
Posted: Friday, Mar 30, 2018 21:17 PM (4years ago )
रत्नपार्क–भृकुटीमण्डप–भद्रकालीको वान–वे अर्थात एकतर्फी सडक । हावाको वेगजस्तै चल्ने गाडी । जो जस्ता हुन्, आकाशका तारा छुनै हिँडेका हुन की भन्ने भान पर्छ गाडीका गतिले । तर भृकुटीमण्डप बजार गेटबाट भृकुटीमण्डप माइक्रो स्टेशन उक्लिँदा आज अरु दिनजस्तो गाडी वेगमा थिएनन् । न त स्टेशनमा धेरै माइक्रो र यात्रु नै ।
बरु बीच सडकमा यात्रुको भिड थियो । काठमाडौँ–बनेपा–धुलिखेल चल्ने ठूलो बस रोकिएको थियो । बसको अगाडिपट्टि सबै झुम्मिएका थिए ।
म हतारमै थिएँ । तर पनि रोकिएँ । भिड छिचोलेर बीच सडकमा रोकिएको बस नेर पुगे । हेर्दा होश उड्ने गरी स्कुटरलाई बसले च्यापेको थियो । पहिलो नजरमा स्कुटरको हालत देख्ला मनमनै लाग्यो । ‘ओ माई गड ! चालक बाँचे होलान् त ?’
तर सबै शान्त थिए । सोध्ने आँट पनि सजिलै आएन । बसका यात्रु झरिरहेका थिए । चालक सुरुमा ड्राइभिङ सिटमै थिए । अरु यात्रु वरिपरी झुम्मिएका थिए । ट्राफिक प्रहरी भर्खरै आएको थियो ।
अनि आधा भाग बसले च्यापको स्कुटी नजिकै एक युवती थिइन् । टाउकोमा हेल्मेट थियो । ‘स्कुटर चालकलाई केही भएन ?’ केही मिनेपछि मैले छेउकै एक व्यक्तिलाई सोधेँ ।
‘ऊ उहाँ । केही भएको छैन् । धन्यै ज्यान गएन ।’ उनले जवाफ फर्काए । कलेज ड्रेसमा झोला भिरेकी युवती ठुलो दुर्घटनाबाट बचेकी थिइन् ।
हाम्रो यो सम्वाद सुनेकी उनले पाइन्ट थोरै माथि सार्दै घाउ देखाइन् । गोलीगाँठानेर रातो डाम बसेको थियो । रगत देखिएको थियो । तर रगत बगेको थिएन ।
बसको अगाडि लम्पसार परेको स्कुटरबाट पेट्रोल मोबिल जस्तो देखिने तरल पदार्थ चुहिएको थियो । अब भने मन शान्त भयो । दुर्घटना ठूलै देखिन्थ्यो । तर क्षति सामान्य भयो ।
उनले घाउ देखाइन् । केही बोल्न सकेकी थिइनन् । बोलिहाल्ने र सोधिहाल्ने पक्षमा हामी पनि थिएनौँ । दुर्घटनापछि रोकिएका गाडीलाई प्रहरीले साइडबाट जान भन्यो । एकछिन फोटो खिचेपछि प्रहरीले स्कुटर घिसारेर बाहिर ताने । सडक छेउमा लिएर स्ट्यान्ड लगाए । ठक्कर दिने बस पनि सडक छेउमा गएर रोकियो ।
अनि बिस्तारै स्कुटर नजिक पुगेकी युवतीलाई प्रहरीले सोधपुछ गर्न थाल्यो । मैले पनि प्याच्चै सोधिहालँे, ‘तपार्इँको नाम ? कता जाँदै हुनुहुन्थ्यो ?’
मलिन अनुहार भए पनि राता आँखा लगाएकी उहाँले भन्नुभयो ‘तपाईँलाई किन चाहियो र ?’
मलाई केही चाहिएको थिएन । पत्रकारे बानी पुरानै थियो । प्याच्चै सोधिहाल्ने । तर जवाफ पाइएन् । यस्तो अवस्थामा सोध्नु हुँदैन्थ्यो ।
एउटै प्रश्नले आफ्नै मनलाई आठ दश वटै प्रश्न सोधे । जे होस्, ज्यान जोगियो । उहाँको शान्त अनि मलिन अनुहारको भावले पनि भन्थ्यो ‘दुर्घटना भयो । तर ज्यान जोगियो ।’
दुर्घटनापछि आक्रोशित हुने, रोई कराई गर्ने अनि धारे हात लगाएर आफूलाई ठक्कर दिने गाडीका ड्राइभरलाई पिटुँला मारुला झँै गर्ने । दुर्घटनामा परेका जोसुकैको बानी हो यो ।
तर उहाँमा त्यस्ताे देखिएन । त्यसैले पनि लाग्यो । बेकार सोधियो । सोधेको पनि जवाफ नपाएपछि अनुहारकै उहाँको फोटो खिच्न पनि मन लागेन् । तर पछाडिबाट स्कुटरसहित उहाँको फोटो भने खिचे । त्यहाँबाट अफिसका लागि हिँडे ।
अलि पर पुगेपछि स्कुटरमा आफ्नो अफिस जाँदै गरेकी एउटी साथीले मलाई देख्नासाथ स्कुटर साइड लगाएर सोधिन् ‘के छ खबर तिम्रो ? भेटघाट पनि छैन् ।’
‘ओहो ! तिमी । मेरो ठिकै छ । तर तिमीलाई देखाइहाल्नु पर्ने एउटा फोटो छ । हेर्छौ ?’
‘हो र ? हेरौँन त ।’
भृकुटीमण्डपको एउटा पसलमा दुई वटा ‘ब्ल्याक टी अर्डर’ गरे । अनि मोबाइलमा फोटो देखाइरहदा उनको मुखबाट निस्किरह्यो ‘ओ माई गड.........।’
मसँग पनि अरु भन्ने शब्द नै के थियो र ? पहिला पहिला ट्रकले किच्ने स्कुटीलाई हिजोआज बसले पनि किच्न थालेछन् ।
फोटो हेरेपछि चिन्तित देखिएकी उसलाई भनेँ, ‘अलि होश गर है स्कुटीवाली । सडकमा सबैतिर हिजो आज तडक भडक छन् ।’